गैरराजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई छुट छैन : एसएसपी ठुले राई
Sat, May 26, 2018 | 11:58:23 NST
16:18 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, वैशाख ८ – एसएसपी ठुले राईले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको साढे दुई महिना भइसकेको छ । आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले योजना बनाएर बस्ने भन्दा पनि अपराध गर्नेका विरुद्ध सिधै एक्सनमा जाने बताउनुभएको थियो । जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै ४० दिने लामो तालिममा अमेरिका जानुभएका एसएसपी राई अहिले परिसरमा फर्किसक्नुभएको छ । नजिकिदै गरेको स्थानीय निकायको चुनावलाई लक्षित गर्दै एसएसपी राईसँगै ललितपुरका अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृतहरु ललितपुरको सुरक्षा अवस्था बुझन् बुधबार ललितपुरका विभिन्न ग्रामिण क्षेत्र गएका थिए । नजिकिदै गरेको चुनाव र ललितपुर प्रहरीको सुरक्षा योजनाका बारेमा नारायण अधिकारीले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अहिले ललितपुरको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा सुरक्षा व्यवस्था सामान्य नै छ । सुरक्षाका हिसाबले कुनै ठूलो चुनौती छैन । हामी चुनावको मुखमा छौं । यो बेला जुन अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने हो हामी त्यही अवस्थामा छौं ।
स्थानीय निकायको चुनाव पनि नजिकिँदै छ । यसलाई लिएर तपाईहरुले सुरक्षा योजना बनाउनु पनि भएको होला । चुनाव लक्षित विशेष सुरक्षा योजना चाँही के छ ?
अन्य जिल्लामा जस्तै ललितपुरमा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना तयार भइसकेको छ । त्यसैका आधारमा समग्र जिल्लाभरीको सुरक्षा योजना हामीले तयारी गरिसकेका छौं । त्यही अनुसार काम गर्छौंैै । गस्ती, निगरानी, संवेदनशिल क्षेत्रको पहिचान गर्दै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउछौं ।
ललितपुरमा चाँही चुनौती के छ ?
ललितपुरमा शहरी क्षेत्रसँग सँगै ग्रामिण क्षेत्र पनि छ । त्यो हिसाबले शहरी र ग्रामिण क्षेत्र दुबै चुनौती छन् । तर त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सुरक्षा योजना बनाएका छौं । त्यस अनुसार ललितपुर प्रहरीले काम गर्नेछ ।
ललितपुरमा भौगोलिक रुपमा विकट ठाउँ पनि धेरै छन् । जहाँ गाडी जान सक्ने अवस्था छैन । चुनावको बेला केही भइहालेमा कसरी प्रहरी त्यस ठाउँमा बेलैमा पुग्न सक्छ ?
स्थायी रुपमा रहेको प्रहरी युनिट हाम्रो त्यहाँ छँदैछ । चुनावलाई मध्यनजर राखेर हामीले मतदान स्थल र केन्द्र हेरेर प्रहरी परिचालन गर्नेछौं । चुनावको बेलामा हामीले विभिन्न पोइन्टहरुमा अस्थायी रुपमा प्रहरी युनिट बनाएर काम गर्नेर्छौ । यसरी काम गर्दा सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न सक्छौं र केही भइहालेमा नजिकैको प्रहरी त्यस ठाउँमा पुग्न सक्छ ।
ललितपुरमा चुनाव लक्षित विशेष सुरक्षा योजनमा कति प्रहरी परिचालन हुन्छन् ?
हामीले आफ्नो कार्यालयको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अलवा आफ्नो डे टु डे काम पनि हुन्छ । थप जिम्मेवारी छँदैछ । सबैतिर प्रहरी परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण सबै प्रहरी चुनावमा मात्रै खटाउन सकिँदैन । अहिलेको योजना अनुसार हामीले १३ सय प्रहरी परिचालन गर्छौ । त्यसमा थप ९ सय म्यादी प्रहरी पनि परिचालन गर्नेछौं ।
चुनाव नजिकिँदै हुँदा पनि कतिपय राजनीतिक दलले चुनाव बहिस्कार गर्ने पनि बताउँदै आएका छन् । यसले सुरक्षा थ्रेट कतिको छ ?
यसपाली मात्रै यस्तो चुनौती आएको होइन । यो भन्दा पहिलाका चुनावमा पनि यस्ता चुनौती आएका थिए । सबै दलले चुनावमा भाग नलिएका घटना पहिले पनि भएका छन् । ती सबै चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी सक्षम छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावमा गुण्डाहरुको परिचालन गर्ने गरेको पनि विगतका दिनहरुमा देखिँदै आएको छ । यो पटक पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
विशेष परिस्थितमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने प्रहरीले योजना बनाएको हुन्छ । त्यो अनुरुप हामीले पनि काम गरेका छौं । त्यसमा दुविधा मान्नु पर्ने कारण छैन । गैरराजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई छुट छैन ।
तपाईहरुलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, अपराधीले काठमाडौंमा अपराध गर्ने र ललितपुरमा आएर लुक्ने । चुनावमा त त्यो झन् बढी हुने होला त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
अपराध र अपराधीहरु गतिशिल छन् । एक ठाउँमा अपराध गरेर त्यही ठाउँमा बस्दैनन् । त्यही बस्ने हो भने अपराधीहरु सबै पक्राउ परिहाल्छन्् नि । त्यही भएर एक ठाउँ अपराध गरेर अर्को ठाउँमा लुक्छन् । ललितपुरमा मात्रै आएर त्यस्ता अपराधी लुकेर बस्छ्न भन्ने होइन अन्त पनि जान्छन् । तर ललितपुरमा लुकेर बसेका अपराधीलाई हामीले पक्राउ गरेर बुझाएको रेकर्ड पनि छ । त्यसरी लुकेर बसेको थाहा पाए प्रहरीले तत्काल पक्राउ गछर्, त्यसमा कुनै शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन ।
तपाईले सुरक्षामा कुनै कमी नगर्ने बताउनुभयो । तर केही दिनअघि मात्रै ख्रिष्टियन महासंघका एक जना सदस्यलाई ललितपुरमा गोली हान्दा प्रहरीले त्यसको तीन दिनपछि मात्रै थाहा पायो नि !
त्यो घटना आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर त्यसमा हाम्रो ल्याप्सेस कहाँ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ । त्यो घटनालाई हेर्दाखेरी घटनासँग हाम्रो पहुँच थियो कि थिएन, त्यो हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा सूचना हो । सूचनामा पनि हामीकहाँ तत्काल नआएको हो । त्यो भएर त्यस्तो हुन गएको हो । तर कसैले पनि जुनैबेला अपराध गर्न सक्छ भन्ने होइन । त्यो तत्वलाई ट्रयाक गर्न हामी लागिरहेका छौं । घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरेरै छाड्छौं ।
तपाईलगायत निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु ललितपुरको ग्रामिण क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था बुझ्न जानुभएको थियो । त्यस ठाउँको सुरक्षा चुनौती कस्तो रहेछ ?
निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना हामीले तयार गरेका थियौं । यो सुरक्षा योजना अनुमानको भरमा हामीले तयार गरेको होइन । हामीसँग भएको तथ्याङ्कको भरमा तयार गरेको थियौं । त्यसको वस्तुस्थिती के छ भनेर हेर्न हामी गएका हौं ।
हामीले बनाएको सुरक्षा योजना अनुरुपको वस्तुस्थिती पाएका छौं । हाम्रो सुरक्षा योजनालाई अझ प्रभावकारी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मिलेको छ । स्थानीय नागरिकसँग अन्तरक्रिया पनि गरौं । त्यो हाम्रा लागि निकै फलदायी छ ।
निर्वाचन सुरक्षा सँगसँगै मतदाता सुरक्षा पनि जोडिएर आउने गर्छ । मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेपछि मात्रै भोट हाल्न जाने वातावरण बन्छ । तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ है भन्ने प्रमाण चाँही के त ?
हामीसँग भइरहेको सुरक्षा इकाइबाट चुनावका बेला प्रहरी परिचालन नर्मल रुपमा भन्दा विशेष रुपमा हुन्छ । आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पठाउँछौं । उहाँहरुले सुरक्षा दिनुहुन्छ । त्यस्तै आम जनताको सुरक्षा भनेको एउटा निकायलेमा मात्र गरेर सम्भव हुँदैन । यसको परिपुरकको रुपमा स्थानीय समुदायले गर्ने भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय समुदायको योगदान पनि आवश्यक छ । यो विशिष्ट परिस्थीतमा उहाँहरुको विशिष्ट योगदान हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अन्तमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको तर्फबाट के भन्न चाहानुहुन्छ ?
मेरो नेतृत्वमा रहेको ललितपुर प्रहरीले निष्ठापूर्वक, इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्छ । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म उहाँहरुको सेवामा हामी समर्पित हुन्छौं । हामीले गरेका प्रयासहरु, अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रणमा नागरिकको साथ चाहिन्छ । नागरिकको साथको अपेक्षाको गरेका छौं । नागरिकलाई सुरक्षित हुनुहन्छ भन्ने प्रत्याभुती दिलाउन भरमगदुर प्रयास गर्छौ ।
तस्बिर सौजन्य : महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको फेसबुक पेजबाट